प्रायः सोधिने प्रश्न - शेन्जेन काइसेEN्ग पीसीबी क।, लि
पीसीबी निर्माण प्रायः सोधिने प्रश्नहरू:
पीसीबीफ्यूचरले के गर्छ?
पीसीबीफ्यूचर विश्वव्यापी पेशेवर निर्माता हुन् जसले पीसीबी बनावट, पीसीबी असेंबली र कम्पोनेन्ट सोर्सि services सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
तपाइँ कस्तो प्रकारको पीसीबी बोर्डहरू निर्माण गर्नुहुन्छ?
पीसीबीफ्यूचरले पीसीबीहरू धेरै प्रकारका उत्पादन गर्न सक्दछ जस्तै एकल / डबल-पक्षीय पीसीबी, मल्टीलेयर पीसीबी, कठोर पीसीबी, लचिलो पीसीबी र कठोर फ्लेक्स पीसीबीहरू।
के तपाईंसँग पीसीबी आदेशहरूको लागि न्यूनतम अर्डर मात्रा (MOQ) छ?
होईन, PCB उत्पादनको लागि हाम्रो MOQ १ टुक्रा छ।
के तपाईं नि: शुल्क पीसीबी नमूनाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ?
हो, हामी नि: शुल्क पीसीबी नमूनाहरू प्रदान गर्दछौं, र क्वाटीटी5पीसी भन्दा बढि छैन। तर हामीले पहिला नमूनाहरू चार्ज गर्न आवश्यक छ, र पीसीबी नमूना लागत तपाईंको ठूलो उत्पादनमा फिर्ता गर्न आवश्यक छ यदि तपाईंको नमूना अर्डर मान सामूहिक उत्पादन मूल्यको १% भन्दा बढि होइन (फ्रेट समावेश नगरी)।
म कसरी द्रुत उद्धरण प्राप्त गर्न सक्छु?
तपाईं फाईलहरू हाम्रो ईमेल बिक्रीमा पठाउन सक्नुहुनेछ @ pcbf भविष्य उद्धरणको लागि, हामी तपाईंलाई १२ घण्टामा सामान्यमा उद्धृत गर्न सक्छौं, छिटो 30० मिनेट जति हुन्छ।
के म मेरो बोर्डहरू प्यानलमा निर्मित गर्न सक्छु?
हो, हामी एकल पीसीबी फाईलहरूसँग काम गर्न सक्दछौं र प्यानेलमा बोर्डहरू उत्पादन गर्दछौं।
के म केवल बेयर PCB अर्डर राख्न सक्छु?
हो, हामी केवल हाम्रा ग्राहकहरु लाई पीसीबी निर्माण सेवा प्रदान गर्न सक्छौं।
तपाईं किन अनलाइन उद्धरण सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ
पीसीबी अनलाइन उद्धरण केवल असभ्य मूल्य र नेतृत्व समयको लागि कार्य गर्दछ, हामी उच्च गुणस्तरको पीसीबी उत्पादनमा वर्णन गर्दछौं, त्यसैले विस्तृत DFM चेक र शुद्धता महत्त्वपूर्ण छ। हामी ग्राहक डिजाइन जोखिम कम गर्न मेशिन र म्यानुअल कार्यको संयोजनमा जोड दिन्छौं।
कसरी पीसीबी उत्पादन को नेतृत्व समय गणना गर्न?
पीसीबी अर्डर नेतृत्व समय गणना हुनेछ पीसीबी निर्माण को सबै EQ हरु पछि। सामान्य टर्नअराउन्ड अर्डरहरूको लागि, अर्को कार्य दिनबाट पहिलो दिनको रूपमा गणना गर्नुहोस्।
के तपाईंसँग हाम्रो डिजाइनको लागि DFM जाँच गर्दै हुनुहुन्छ?
हो, हामी सबै अर्डरको लागि नि: शुल्क DFM सेवा प्रदान गर्न सक्दछौं।
Turnkey PCB FAQs:
के तपाइँ प्रोटोटाइप पीसीबी असेंबली प्रदान गर्नुहुन्छ (कम भोल्युम)?
हो, हामी टर्नकी पीसीबी असेंबली प्रोटोटाइप सेवा प्रदान गर्न सक्छौं र हाम्रो MOQ १ टुक्रा छ।
तपाइँलाई PCB सम्बन्धी अर्डरहरूको लागि कुन फाइलहरू आवश्यक छ?
सामान्यतया, हामी तपाईलाई गर्बर फाईलहरू र बीओएम सूचीमा आधारमा मूल्य उद्धृत गर्न सक्छौं। यदि सम्भव छ भने, छनौट गर्नुहोस् र फाईलहरू राख्नुहोस्, असेंबली ड्राइंग, विशेष आवश्यकता र निर्देशनहरू हामीसँग प्रशस्त गर्न पनि उत्तम।
के तपाई नि: शुल्क प्रोटोटाइप पीसीबी असेंबली सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ?
हो, हामी नि: शुल्क प्रोटोटाइप पीसीबी असेंबली सेवा प्रदान गर्दछौं, र क्वाटी3पीसी भन्दा बढि छैन। तर हामीले पहिला नमूनाहरू चार्ज गर्न आवश्यक छ, र पीसीबी नमूना लागत तपाईंको ठूलो उत्पादनमा फिर्ता गर्न आवश्यक छ यदि तपाईंको नमूना अर्डर मान सामूहिक उत्पादन मूल्यको १% भन्दा बढि होइन (फ्रेट समावेश नगरी)।
पिक र प्ले फाईल के हो (सेन्ट्रोइड फाईल)?
पिक र प्ले फाईललाई सेन्ट्रोइड फाइल पनि भनिन्छ। यो डाटा, एक्स, वाई, रोटेशन, बोर्डको साइड (गर्न वा तल्लो कम्पोनेन्ट साइड) र सन्दर्भ डिजाइसेटर सहित, एसएमटी वा थ्रु होल एसेम्ब्लि मेशिनहरू द्वारा पढ्न सकिन्छ।
तपाईं टर्नकी पीसीबी असेंबली सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ?
हो, हामी टर्नकी पीसीबी असेंबली सेवा प्रदान गर्दछौं, जसमा सर्किट बोर्ड उत्पादन, कम्पोनेन्ट्स सोर्सि,, स्टेन्सिल, र पीसीबी जनसंख्या र परीक्षण समावेश छ।
हामीबाट किन खरीद गर्ने केही कम्पोनेन्टहरू तपाईंबाट मूल्य बढाउँदै छन् यदि हामी द्वारा खरीद गरियो भने?
चीनमा आयात गरिएको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरूले १%% भ्याट् थप्नु पर्छ र ती मध्ये केहीलाई चार्ज लगाउनु पर्छ जुन प्रत्येक भागको एचएस कोड भन्दा फरक छ।
किन तपाईंबाट केहि कम्पोनेन्टहरू सोर्सि price प्राइस मूल्य भन्दा कम छन् जुन वितरक वेबसाइटहरूमा देखाउँदछ?
हामी धेरै क्रोल्ड प्रसिद्ध वितरकहरू जस्तै डिजी-कि, माउस, एरो र आदिको साथ काम गर्दछौं, हाम्रो ठूलो वार्षिक खरीद रकमको रूपमा, तिनीहरूले हामीलाई धेरै कम छुट दिन्छन्।
तपाईंले कहिलेसम्म टर्नकी पीसीबी परियोजनाहरू उद्धरण गर्न आवश्यक छ?
सामान्यतया १-२ कार्य दिनहरू हामी लिन सक्दछौं विधानसभा परियोजनाहरूको उद्धरण गर्न। यदि तपाईंले हाम्रो उद्धरण स्वीकार गर्नुभएन भने, तपाईं आफ्नो ईमेल बाकस र जुन फोल्डर हामीबाट पठाइएको कुनै ईमेलको लागि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामी द्वारा कुनै ईमेल पठाईएको छैन भने, कृपया सम्पर्कका लागि डबल सम्पर्क বিক্রয়@pcbfuture.com सहायताको लागि।
के तपाईं हाम्रो पीसीबीको लागि कम्पोनेन्ट्सको गुणस्तर निश्चित गर्न सक्नुहुन्न?
बर्षको अनुभवको साथ, PCBFuture विश्व भर परिचित वितरकहरू वा निर्माताहरूको साथ भरपर्दो कम्पोनेस सोर्सि channel च्यानल निर्माण गरेको छ। हामी उनीहरूबाट उत्तम समर्थन र राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सक्दछौं। यसका अतिरिक्त, हामीसँग गुणहरूको नियन्त्रण टोली छ निरीक्षण र अवयवहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न। तपाइँ कम्पोनेन्टको गुणस्तरका लागि आराम गर्न सक्नुहुन्छ।
के म क्रेडिट खाता पाउन सक्छु?
छ महिना भन्दा बढी हामीसँग सहयोग गर्ने र प्रत्येक महिना बारम्बार अर्डरहरू गर्ने दीर्घकालीन ग्राहकहरूको लागि हामी credit०-दिन भुक्तान सर्तहरूको साथ क्रेडिट खाता प्रस्ताव गर्दछौं। अधिक विवरण र पुष्टिकरणका लागि, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई चाँडै फिर्ता भेट्नेछौं।